MYUTSAWMYIT : စစ်ဗိုလ်ချုပ်များသတင်း: HRW အစီရင်ခံစာအပေါ် ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရ နဲ့ နေပြည်တော်ရဲ့ တုံ့ပြန်ချက်
HRW ရဲ့ ဒီကနေ့ ထုတ်ပြန်တဲ့ အစီရင်ခံစာက စာမျက်နှာ ၁၅၀ ကျော် ရှိပါတယ်။
http://www.hrw.org/reports/2013/04/22/all-you-can-do-pray-0 မှာ ဒေါင်းလုတ် လုပ်နိုင်ပါပြီ။
"ရိုဟင်ဂျာ နှင့် ကမန် မူဆလင် အသိုင်းအ၀န်း အပေါ် အောက်တိုဘာလ တိုက်ခိုက်မှုကို ဒေသခံ ရခိုင်နိုင်ငံရေးပါတီအုပ်စုများ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းများ၊ သာမန်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများက စီစဉ်၊ အကောင်အထည်ဖော်၊ ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အစိုးရ လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့က တိုက်ရိုက် အထောက်အကူပေးခဲ့ကြသည်"
လို့ အစီရင်ခံစာမှာ ရေးထားပါတယ်။
"ရိုဟင်ဂျာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး နှင့် ကလေးများ သတ်ဖြတ်ခံရသည်၊ တချို့ အစုလိုက်အပြုံလိုက် မြှုပ်နှံခံရသည်၊ ၎င်းတို့၏ ရွာများ၊ ရပ်ကွက်များ မြေလှန်ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရသည်" လို့လည်း ရေးထားပါတယ်။
(The October attacks were against Rohingya and Kaman Muslim communities and were organized, incited, and committed by local Arakanese political party operatives, the Buddhist monkhood, and ordinary Arakanese, at times directly supported by state security forces.
Rohingya men, women, and children were killed, some were buried in mass graves, and their villages and neighborhoods were razed. ကို တိုက်ရိုက် ဘာသာပြန်လိုက်တာပါ။)
HRW ရဲ့ အစီရင်ခံစာကို ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရ ပြောခွင့်ရအရာရှိက ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပယ်ချကြောင်း AP သတင်းတပုဒ်မှာ ရေးထားပါတယ်။
အောက်ခြေမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကို HRW က နားလည်သဘောပေါက်ခြင်း မရှိဘူးလို့ ပြည်နယ်အစိုးရ ပြောခွင့်ရအရာရှိ ဦးဝင်းမြိုင်က ဆိုပါတယ်။
"ဒီတိုင်းပြည်မှာ မငြိမ်မသက်ဖြစ်တာတွေကို ကျနော်တို့ မလိုလားပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲလို့ ဆိုတော့ ဒီလိုဖြစ်ရပ်မျိုးတွေကြောင့် ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်ရေး
အစီအစဉ် အဟန့်အတား ဖြစ်တယ်၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလည်း ထိခိုက်ရတယ်" လို့ ဦးဝင်းမြိုင်က ပြောကြောင်း AP သတင်းမှာ ဖတ်ရမှာပါ။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ပြောခွင့်ရအရာရှိ ဦးရဲထွဋ်ကလည်း ဒီအစီရင်ခံစာကို ချက်ချင်း တုံ့ပြန်ပါတယ်။ သူ့တုံ့ပြန်ချက်ကို သူ့ဖေ့စ်ဘုတ်ကနေ ကူးယူ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 9:29 PM